Izwe elikhululekile: uMartin Vrijland
Tshintsha: ilizwe elikhululekile
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Meyi 2020	• 10 Comments
Ngokuqinisekileyo uqaphele. Iwebhusayithi ibinakho ngaphandle kwe-13 iiyure. Ekugqibeleni, kwavela ukuba luhlaselo lwe-DDoS, ekungekho mfu lilifu lingamelana nalo. Kuya kufuneka uhlale ngaphandle kwaye unethemba lokuba umonakalo ulinganiselwe. Uhlaselo lwe-DDoS kukuba izigidi zeekhompyuter okanye izixhobo ze-smart ziye zafaka iskripthi singabonwa […]
Umvavanyi weendaba ezikhohlisayo i-Nu.nl ibaleka ngamabali e-coronavirus kunye nezihloko ezingeyonyani
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Aprili 2020	• 13 Comments
"Kutheni abo bacinga ngeyelenqe lamaDatshi begxeka uCorona kwiBill Gates," ibingumxholo wenqaku le-nu.nl apho bezame khona okwesibini ukuba neqela elihlala likhula. Inyani yokubeka oku ibonisa ukuba iNetherlands evukayo iyaqala ukubeka isoyikiso kumandla. Kwinqaku […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Matshi 2020	• 8 Comments
Yayingenakuphepheka. Ndihambe ndehla esitratweni ndanikwa abantu abaneemaski zomlomo ababecinga ukuba ndityhafile kakhulu (ndinomkhuhlane nje). Baye bandibuza ukuba kutheni ndinganxibi imask. Ukujonga okulandelayo, okufumaneka phantse kuzo zonke izitrato ezibini, ijoni laseMelika lindimisile. […]
Apho i-coronavirus ibonakala ngathi isasazeka nzima kwaye ibangela uloyiko, umfundi osisilumkiso wale ndawo ukwazi ukwenza into entle. Xa waphaphama, wafumanisa ukuba intsholongwane ibonakala inefuthe elikhulu kuqoqosho, kodwa ukuba iqhuma kwezemali ibisoloko lithetha […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Novemba 2019	• 3 Comments
Lifikile ixesha lokuba incwadi entsha 'Eyona nto siyibonayo'. Izolo ndibonelele abafundi incwadi ye-Ebook Reader (okanye i-e-Reader ukuba uyafuna) nakwi-PDF version. Ukusukela ngoku incwadi yamaphepha ebuyayo ikwakhona ngencwadi yeencwadi.esl ngexabiso le- X 24,95. Apha ngezantsi unga […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-25 Septemba 2019	• 5 Comments
Kwiminyaka yakutshanje bendihlala ndibuzwa ukuba kutheni ndingashicileli incwadi. Besele ndiyazi ukuba le ncwadi izokuza, kodwa umfanekiso wawusenziwa. Mhlawumbi ichazwa kakuhle njengoko ilinde ukugqitywa kokukhutshelwa kwefayile yakho […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Agasti 2019	• 2 Comments
Kule veki izayo ndifuna ukuchitha ixesha ndicima intloko emva kweminyaka yokubhala kakhulu. Ngamanye amaxesha kuyadingeka nje ukuba uphumle kwaye uzimele kude nezikrini kunye ne-intanethi. Ndingathanda ukwenza isiphakamiso seholide. Kule minyaka idlulileyo ndiye ndafowuna rhoqo […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Meyi 2019	• 3 Comments
Ngomnxeba wam nomnxeba kunye noWilson Boldewijn waseTelgraaf, sele ndibhekiselele kuyo. Amajelo akwazi ukwenza izinto ezinzulu. Ndithe ndathetha ukuba ungenza udliwano-ndlebe nomntu ngamnye ngokurekhoda kwezwi kunye nesithombe. Le ndlela isele ikhona kwaye ibizwa ngokuba yinto ebonakalayo ebusweni (eyaziwa nangokuthi 'ukutshintsha ubuso'). Samsung [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Meyi 2019	• 18 Comments
Izolo ntambama ndibe nencoko yocingo kunye noWilson Boldewijn we-Telegraaf emva kwesicelo esivela kuye ukuba athathe inxaxheba kwichungechunge lweengcamango zobuqhetseba. Kwimpendulo yam e-mail ndixelele ukuba andikholelwa kwiingcamango zobuqhetseba. Wayecinga ukuba oko kungasabela ngendlela ephawulekayo, ngoko ndavuma ukummbiza [...]
Utyelelo lulonke: 2.528.206